Sida Loo Dhaqaajiyo Qoraalkaaga Blog-ka loona ilaaliyo xilliga raadinta | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 6, 2010 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Haddii aad leedahay baloog jira, fursadaha ayaa ah inaad leedahay hay'ad mashiin raadin oo ku dhisan bartaas ama subdomain. Caadi ahaan, shirkaduhu waxay si fudud u bilaabaan baloog cusub oo ay ka tagaan tii hore. Haddii waxyaabahaagii hore ay lumaan, tani waxay noqon kartaa khasaare weyn oo soo kordha.
Si loo ilaaliyo awooda mashiinka raadinta, waa kuwan sida loogu haajiro barxad cusub oo wax lagu qoro:
Dhoofinta waxyaabahaagii hore ee blogga oo ku soo dhoofso bartaada cusub ee wax lagu qoro. Xitaa haddii aad tan ku sameysid gacanta, taasi waa ka fiican tahay inaad ku bilowdo nuxur la'aan.
Ku qor 301 ka wareejin URL-yada hore ee boostada cinwaanada URL-yada cusub ee boostada. Qaar ka mid ah barnaamijyada waxay leeyihiin qaybo ka mid ah dib u habeynta ama plugins si tan loo fududeeyo.
Ka qor cinwaan dib u habeyn ah RSS qufulankii hore si aad ugu qoro bogga cusub RSS RSS. Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho FeedPress si aad u cusbooneysiin karto quudinta iyada oo aan loo kala go'in mustaqbalka (In kasta oo aan jeclaan lahaa in qof kale la soo baxo wax beddelaad ah Feedburner! Waa wax laga naxo).
Haddii aad guureyso domains ama subdomains, wali waa suurtogal in dib loogu noqdo cinwaanka cusub ee baloogga. UPDATED: Waxaan ogaaday in macaamiisha ay lumiyeen qaar ka mid ah darajooyinkooda markay samaynayaan subdomains laakiin mararka qaarkood waxay awoodaan inay si dhakhso leh dib ugu soo noqdaan. Beddelaadda gundhigyada gebi ahaanba waxay yeelan kartaa saameyn culus. Waxaan isku dayi lahaa inaan ka fogaado tan qiima kasta.
Tijaabi in badan oo ka mid ah URL-yadii hore ee blog-kaaga oo hubi inay si sax ah horay ugu socdaan.
Monitor Raadinta Raadinta Google iyo Maamulayaasha Bing bogagga aan la helin oo iyaga sax. Ha ku mashquulin hubinta maalin kasta - waxay qaadan doontaa toddobaad ama laba ka hor intaadan arki doonin tijaabada
Dib u daabac khariidada bogga oo dib u soo gudbi mar kasta oo aad saxdo waxyaabaha.
Haddii aad beddeleyso boggaaga ama subdomain, khasaaraha ugu weyn ee aad qaadan doontid wuxuu ku yaal bogagga sida Technorati, oo u baahan inaad iska diiwaangeliso cinwaankaaga cusub ee baloogga. Ma haystaan ​​qaab ay ku cusboonaysiiyaan cinwaankaaga dhabta ah.
Waa kuwan shaashadda Google Search Console iyo sida aad u raadsan karto tixraacyada aan la helin ee 404:
Adoo hubinaya in macluumaadkaaga si sax ah loo wareejiyay, kaliya ma hubin doontid in martida ay wali ka dhigi karaan waxyaabaha ay raadinayeen, waxaad sidoo kale abuureysaa wax badan oo ka yar 404 Bogagga Aan La helin. Hal qoraal oo arrintan ku saabsan… sii Maamulayaasha websaydhka toddobaad ama laba toddobaad si ay ula qabsadaan! Ka dib markaad dib u rogto cinwaanadaas xun, isla markiiba kuma hagaajin doono Webmasters-ka (Ma hubo sababta!).
Qoraalkaas, waxaan inta badan ogaadaa in boggaga dibedda ay daabacaan URL-yo khaldan - markaa xitaa waxaan u rogi doonaa URL-yadaas xun si habboon!
Tags: 404maamule webingwebmaster googlexogta darajayntaraadinta xogta darajadaby webmastermacalimiin
Sababaha: Sadaqada + Facebook = GUUL!
Waan ku raacsanahay in WordPress plugin Redirection uu yahay badbaadiye nololeed, runti waan jeclahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado markaa waxaan ogahay hadda, waxay iga badbaadin laheyd madax xanuun badan. Mahadsanid Douglas!